Sony Xperia XA3 ayaa lagu sifeeyay fiidiyaha cusub ee soo-bandhigista ah | Androidsis
Laba mashruuc oo ay soo saartay Sony ayaa loo qorsheeyay sanadkan. Waxaan ka hadlaynaa Xperia XA3 iyo XA3 Ultra, oo ah labada terminaal ee dhowaan imaan doona, in kasta oo Xperia XA2 iyo XA2 Ultra waxaa lasii daayay horaantii sanadkan. Kahor soo bandhigida la sheegay, ee faahfaahinteeda aan la ogeyn, soo bandhigida Xperia XA3 waxay ka muuqatay muuqaal 360-degree ah, sidaasna ku tusaysa naqshadeyntaada xaglaha oo dhan.
Bixinta waxay ku saleysan tahay CAD waxaana abuuray @OnLeaks. Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa in qalabka uu la imaan doono shaashadda saamiga 18: 9, kaas oo la filayo inuu ahaado 5.9-inji-dherer ah, guddi aan culeys lahayn oo leh FullHD + xallinta 2.160 x 1.080 pixels, oo ay hoos u dhigayso cidhiidhyo cidhiidhi ah. Waxbadan ka baro muuqaalka qalabkan!
Xogtii hore ee la shaaciyay waxay soo jeedineysaa taas terminal-ka wuxuu leeyahay cabirro ah 155.7 x 68.3 x 8.4 mm, laakiin waxaa jiri doona waxoogaa ballac ah dhinaca kamaradda oo dhumucdiisuna noqon doonto 8,9mm.
Marka laga hadlayo nashqada lagu arki karo fiidiyaha, Xperia XA3 wuxuu leeyahay akhristaha faraha oo ku dhegan dhinaca midig, inta udhaxeysa giraanta mugga iyo badhanka awoodda. Waxay kaloo leedahay dekedda nooca USB-ka ee C oo salka ku haysa oo waxay la socotaa qaab-dhismeedka kamarad gadaal laba-geesood leh leh oo ku taal xarunta ugu sareysa, waxyarna ka hooseysa tooshka LED-ka.
Sida ku saabsan wararka xanta ah ee farsamada, Sony Xperia XA3 waxaa ku shaqeyn doona processor-ka octa-core AIE Qualcomm Snapdragon 660, taas oo ah cusbooneysiin ku saabsan qalabka 'SD630 chipset' ee loo adeegsaday Xperia XA2. Intaas waxaa dheer, waxaa lafilayaa inuu suuqa la gaaro RAM 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd gudaha ah, iyo waliba qaabab kale oo aad u wanaagsan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Muuqaalka Sony Xperia XA3 waxaa lagu sifeeyaa qaab cusub [Muuqaal]
Maxay yihiin furayaasha qarsoodiga ah ee ku jira Android